१० जलविद्युुत कम्पनीले ३ अर्ब २४ करोड बढीकाे सेयर जारी गर्दै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
असार २८, २०७५ 4949 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
१० जलविद्युत कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँ बढीको सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका छन् । सबै कम्पनीले ३ अर्ब २४ करोड ८१ लाख ५९ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका छन् । सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँड गर्न सबै कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकसमेत तोकिसकेका छन् ।
बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि ३ करोड २४ लाख ८१ हजार ५ सय ९६ कित्ता साधारण सेयरको बिक्री खुल्ला हुनेछ । बोर्डका अनुसार मध्यभोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीले कर्मचारीका लागि छुट्याइएको १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मूल्यको १ करोड ४४ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएको छ ।
कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने ऋण दाता तथा संस्थापक संस्थाका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीले सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँड गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, प्रभुु क्यापिटल, सिभिल क्यापिटल मार्केट, एस क्यापिटल, सिबिआइएल क्यापिटल, सानिमा क्यापिटल र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ ।
यस्तै, जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दै आएको सिइडिबी हाइड्रो फन्डले २२ करोड ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ८९ हजार ३ सय कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गर्न बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँड गर्न सनराइज क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ ।
युुनिभर्सल पावर कम्पनीले पनि दोलखामा निर्माणाधीन ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ९६ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मूूल्य बराबरको ९६ लाख ६१ हजार ६सय १० कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीको सेयर निष्कासन गर्न सिद्धार्थ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकिएको छ ।
यसैगरी, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले पनि सर्वसाधारणका लागि ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ मूल्यको ७ लाख ३६ हजार २ सय ८६ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । सिद्धार्थ क्यापिटलले कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गर्नेछ ।
यसैगरी, कालिका पावर कम्पनीले पनि सर्वसाधारणका लागि १२ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता सेयर जारी गर्ने भएको छ । सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गर्न काठमाडौं क्यापिटल मार्केट र ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई नियुक्त गरिएको छ ।
यस्तै, शिवश्री हाइड्रो पावर लिमिटेडले सिन्धुुपाल्चोकमा निर्माणाधीन आयोजनाको स्थानीयका लागि छुट्याइएको १४ लाख ७६ हजार ४ सय कित्ता सेयर निष्कासन गर्दैछ । शिवश्रीको सेयर सिद्धार्थ क्यापिटल र नेपाल एसबिआईले निष्कासन गरेर बाँडफाँड गर्नेछन् ।
गर्जङ उपत्यका हाइड्रो पावर, लाफिङबुद्ध हाइड्रो पावर, युनिक हाइडल र हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले पनि आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याइएको सेयर निष्कासनको तयारी गरेका छन् । गर्जङको २ लाख, लाफिङबुद्धको ९ लाख ७८ हजार, युनिक हाइडलको ५ लाख ५० हजार, हिमालय ऊर्जाको ९ करोड ९० लाख रुपैयाँको ९ लाख ९ हजार कित्ता सेयर जारी हुने बोर्डले जनाएको छ ।
सेयर निष्कासन गर्ने सबै कम्पनीको प्रतिकित्ता खरिद मूल्य १ सय रुपैयाँ हुनेछ ।